ကလေးငယျမြားအတှကျအထူးစီမံဖနျတီးထားသညျ့ စူပါဟီးရိုးနှာခေါငျးစညျးမြား။ – SoShwe
So Shwe June 3, 2020	LifeStyle Leaveacomment
Marvel Comics မြားကို အဓိကရေးဆှဲဖနျတီးပေးနသေညျ့ပုဂ်ဂိုလျက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာလအတှငျး ကလေးငယျမြားအတှကျ နှာခေါငျးစညျးမြားကို အထူးသီးသနျ့စီမံဖနျတီးပေးခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ အဆိုပါ အိုငျယာလနျသရုပျဖျောဆရာဖွဈသူ Will Sliney သညျ Avengers ၊ Spider- Man နဲ့ X- Men တို့ကဲ့သို့ အဓိကဇာတျရုပျမြားစှာကို သရုပျဖျောရေးဆှဲခဲ့သူတဈဦးဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျ၌ သူ့ရဲ့ပညာအရညျအခငျြးမြားကို မကျြနှာဖုံးမြားဖနျတီးထုတျလုပျရငျး ဖျောပွခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ကုနျကစြရိတျသကျသာသညျ့ EasyJet မှ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျပြံ့နှံ့နသေညျ့ကာလအတှငျး လကွေောငျးလိုငျးပြံသနျးမှုမြားနဲ့ပတျသကျ၍ စညျးကမျးအသဈမြားထုတျပွနျခဲ့ရာ ထိုအပျေါ၌ ကလေးငယျမြား ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့မှုမဖွဈစရေနျ ရညျရှယျကာ ယခုကဲ့သို့ကလေးငယျမြားအကွိုကျကို တီထှငျကွံဆခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
EasyJet အနဖွေငျ့ လာမယျ့ဇှနျလ (၁၅) ရကျနေ့၌ သတျမှတျထားသညျ့လကွေောငျးလိုငျးမြားကို ပွနျလညျပွေးဆှဲရနျ ရညျရှယျထားပွီး အဆိုပါအစီအစဉျအတှကျ ထောငျနဲ့ခြီသညျ့နှာခေါငျးစညျးမြားကို ပွငျဆငျထားရကွောငျးလညျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ပတျသကျ၍လညျး Will က “နှာခေါငျးစညျးတှနေဲ့လေယာဉျစီးရတာက လူတိုငျးအတှကျ အတှအေ့ကွုံအသဈဖွဈနိုငျပွီး အထူးသဖွငျ့ ငယျရှယျတဲ့ကလေးငယျတှအေတှကျပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Comic စာအုပျထဲက ဒီလိုမြိုးဒီဇိုငျးတှကေို နမူနာယူဖနျတီးပေးခဲ့တာဖွဈပွီး ဒါကနှာခေါငျးစညျးတပျဆငျရမယျ့ ကလေးငယျတှအေတှကျ အကူအညီဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။” ဟုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
လကွေောငျးလိုငျးမြားပွနျလညျပွေးဆှဲခြိနျ၌ လဆေိပျနဲ့လယောဉျပျေါ၌ နှာခေါငျးစညျးမြား မဖွဈမနတေပျဆငျထားရနျ EasyJet က သတျမှတျထားပွီး အဆိုပါအခကျြက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျ၍ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးကိစ်စရပျမြားအတှကျ မဖွဈမနပေါဝငျသညျ့အစိတျအပိုငျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လယောဉျပြံသနျးနစေဉျအတှငျး၌ အစားအသောကျမြားရောငျးခပြေးသှားမညျမဟုတျဘဲ လယောဉျပျေါ၌လညျး လကျသနျ့စငျဆေးရညျမြားကို ထားရှိပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
EasyJet ရဲ့ လကွေောငျးပြံသနျးမှုဆိုငျရာကပ်ပတိနျ David Morgan က “မတူညီတဲ့ပတျဝနျးကငျြတဈခုမှာ ကလေးငယျတှလေယောဉျစီးနငျးတဲ့အခြိနျအတှကျအသုံးပွုမယျ့ နှာခေါငျးစညျးတှကေို Comic တှနေဲ့ဖနျတီးဖို့ သရုပျဖျောဆရာနဲ့ပူးပေါငျးခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ လာမယျ့နှရောသီကာလမှာ ကလေးငယျတှအေနနေဲ့ ဒီနှာခေါငျးစညျးတှကေိုတပျဆငျရငျး ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူ ခရီးသှားလာနိုငျပွီး ဒါကမိဘတှအေတှကျလညျး ပိုပွီးအဆငျပွစေနေိုငျပါတယျ။” ဟု ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ရပျနားထားရသညျ့ EasyJet ရဲ့လကွေောငျးလိုငျးမြားကို ကနဦးအစီအစဉျအနဖွေငျ့ ယူကနေဲ့ပွငျသဈနိုငျငံပွညျတှငျးတို့၌ စတငျပြံသနျးပွေးဆှဲသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
Marvel Comics များကို အဓိကရေးဆွဲဖန်တီးပေးနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလအတွင်း ကလေးငယ်များအတွက် နှာခေါင်းစည်းများကို အထူးသီးသန့်စီမံဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ အိုင်ယာလန်သရုပ်ဖော်ဆရာဖြစ်သူ Will Sliney သည် Avengers ၊ Spider- Man နဲ့ X- Men တို့ကဲ့သို့ အဓိကဇာတ်ရုပ်များစွာကို သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်၌ သူ့ရဲ့ပညာအရည်အချင်းများကို မျက်နှာဖုံးများဖန်တီးထုတ်လုပ်ရင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် EasyJet မှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသည့်ကာလအတွင်း လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းမှုများနဲ့ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းအသစ်များထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ထိုအပေါ်၌ ကလေးငယ်များ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ယခုကဲ့သို့ကလေးငယ်များအကြိုက်ကို တီထွင်ကြံဆခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
EasyJet အနေဖြင့် လာမယ့်ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့၌ သတ်မှတ်ထားသည့်လေကြောင်းလိုင်းများကို ပြန်လည်ပြေးဆွဲရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အဆိုပါအစီအစဉ်အတွက် ထောင်နဲ့ချီသည့်နှာခေါင်းစည်းများကို ပြင်ဆင်ထားရကြောင်းလည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်၍လည်း Will က “နှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့လေယာဉ်စီးရတာက လူတိုင်းအတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်ဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် Comic စာအုပ်ထဲက ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေကို နမူနာယူဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါကနှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ရမယ့် ကလေးငယ်တွေအတွက် အကူအညီဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လေကြောင်းလိုင်းများပြန်လည်ပြေးဆွဲချိန်၌ လေဆိပ်နဲ့လေယာဉ်ပေါ်၌ နှာခေါင်းစည်းများ မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ထားရန် EasyJet က သတ်မှတ်ထားပြီး အဆိုပါအချက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်၍ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက် မဖြစ်မနေပါဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်း၌ အစားအသောက်များရောင်းချပေးသွားမည်မဟုတ်ဘဲ လေယာဉ်ပေါ်၌လည်း လက်သန့်စင်ဆေးရည်များကို ထားရှိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
EasyJet ရဲ့ လေကြောင်းပျံသန်းမှုဆိုင်ရာကပ္ပတိန် David Morgan က “မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ ကလေးငယ်တွေလေယာဉ်စီးနင်းတဲ့အချိန်အတွက်အသုံးပြုမယ့် နှာခေါင်းစည်းတွေကို Comic တွေနဲ့ဖန်တီးဖို့ သရုပ်ဖော်ဆရာနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် လာမယ့်နွေရာသီကာလမှာ ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီနှာခေါင်းစည်းတွေကိုတပ်ဆင်ရင်း ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ခရီးသွားလာနိုင်ပြီး ဒါကမိဘတွေအတွက်လည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရပ်နားထားရသည့် EasyJet ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းများကို ကနဦးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ယူကေနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံပြည်တွင်းတို့၌ စတင်ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ဘီလြံနာမလေး Kylie Jenner နဲ့ ငှကွေေးအရှုပျတျောပုံ။ (Kylie Jenner တဈယောကျ ဘီလြံနာမဟုတျတော့ဘူးလား ? ? ?)
Next ကမ်ဘာ့ပျေါ၌ လစာငှအေမြားဆုံးဘောလုံးသမား (၁၀) ယောကျ။